décembre 2016 - Page 2 sur 60 -
Andry Rajoelina:MITADY TANY MALEMY HANORENAM-PANGADY
Nankalazaina tsy nisy toa izany ny fanomezana nomen’ny filohan’ny Tetezamita teo aloha ny Akamasoa ny andron’ny Noely teo. Vary 8 taonina no natolony ho an’ireo sahirana beazina ao amin’io akanin’i mopera Pedro io tamin’izany. Tsy …Tohiny
Seranam-piaramanidina Ivato:VOLAMENA 34,565 KG NO SAIKA HAVOAKA AN-TSOKOSOKO
Tsy vaovao ny resaka fanondranana harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara. Saika misy foana izany isan-taona, ary ireo tsy manara-dalàna no tena betsaka. Anisan’ny lasibatra amin’ity fanondranana entana an-tsokosoko ity ny volamena. Raha omena ny salan’isa …Tohiny
Fanamboarana Carte Grise Biométrique:NITERAKA FILAHARAM-BE TETSY AMIN’NY FARITANY AMBOHIDAHY
Olona an-jatony mahery. Niteraka fitohanan’ny fifamoivoizana avy hatrany ny filaharan’ny olona hanatanteraka fanamboarana sy fanavaozana ny taratasy famantarana fiara na “carte grise” sy taratasy fahazoan-dalana mitondra fiara na “permis” ho biômetrika, omaly. Nanomboka teny amin’ny …Tohiny
Fiarovana ny zon’ny mpamorona:HAMPAKARINA NY TETIBOLA HIADIANA AMIN’NY PIRATY AMIN’NY 2017
Ady isan’andro ny fiarovana ny zon’ireo mpanao ny asa famoronana eo amin’ny sehatry ny kolontsaina, indrindra noho ny fivoaran’ny teknolojia izay manasarotra ny ady atao isan’andro. Raha toa ka manodidina ny 220 000 000 Ariary ny …Tohiny
Maharante Jean De Dieu : « Voafidim-bahoaka ny Filoha ka tsy tokony hametra-pialana »
Ankoatra ny maha minisitry ny Asam-panjakana azy, dia mpahay lalàna ( mpitsara) koa ny minisitra Maharante Jean de Dieu. Tsara toerana izy raha milaza ny fahitany izao toe-draharaha izao. Voafidim-bahoaka ny Filoha ka tsy tokony ...Tohiny